China 40Khz Ultrasonic Nano Mwaya mudziyo ne High Frequency Kutsiva Tsika Mbiri-Urume Spraying Kugadzira uye Fekitori | Qianrong
40Khz Ultrasonic Nano Spray Chishandiso ine Yakakwira Frequency Kutsiva Tsika Mbiri-fluid Spraying
40K ultrasonic nano kupuruzira inzira yakasarudzika yekumwaya tekinoroji, inova nzira yekupuruzira inoenderana neiyo ultrasonic atomizing kamwene tekinoroji. Zvichienzaniswa neyechinyakare pneumatic maviri-emvura kupopera, ultrasonic atomized spraying inogona kuwana zvirinani kufanana, kuonda kwekukora ukobvu uye yepamusoro chaiyo. Panguva imwecheteyo, nekuti iyo ultrasonic yekumwa kamwene inogona kuiswa atomized pasina rubatsiro rwemhepo kumanikidza, kushandiswa kweiyo ultrasonic kupurudzira kunogona kudzora zvakanyanya kupwanya kwependi panguva yekumwaya nzira, uye woziva chinangwa chekuchengetedza pendi. Iyo yekushandisa mwero weiyo ultrasonic kupuruzira inopfuura kanopfuura ka4 iyo yechinyakare maviri-emvura kupopera.
Ultrasonic nozzles inoshanda nekushandura yakakwira-frequency kurira mafungu kuita echimakanika simba, uye echimagetsi simba rinotamirwa kune iro mvura kuti riite amire mafungu. Mvura yacho inosvitswa kune iyo atomization pamusoro kuburikidza nemuromo. Kana mvura yacho ikasiya iyo atomization pamusoro pebhu, inoputswa kuita mhute yakanaka yunifomu micron madonhwe, nokudaro ichiwana atomization.
Iyo ultrasonic atomizing kamwene inogadzirwa neakakwira-simba titanium alloy uye nezvimwe zvine simba simbi, iyo inoipa iyo yakanakisa kemikari kuramba uye yakanakisa acoustic zvivakwa. Iyo electroactive element iri mune yakavharirwa dzimba dzinodzivirira iyo kamwene chikamu kubva kune yakasviba yekunze.
Pashure: Ultrasonic Metal Powder Atomization Technology yeTin Powder NePamusoro Frequency Ultra
Zvadaro: Inotakurika Ultrasonic transducer Impedance analyzer Kuyera Chishandiso cheParamende
Ultrasonic Metal Powder Atomization Tekinoroji ...
Ultrasonic Core Zvikamu Kutyaira Transducer 3 ...
60Khz 150W Ultrasonic Kucheka Welding Transducer yeCo ...